६ महिनादेखि कहाँ बे’पत्ता भइन् पाँच महिनाकी गर्भवती मनिषा ? – PathivaraOnline
Home > समाज > ६ महिनादेखि कहाँ बे’पत्ता भइन् पाँच महिनाकी गर्भवती मनिषा ?
फाल्गुण १२, पर्वत । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नं १ पाङ माइती भई म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नं ८ मा बिहेबारी गरेकी एक गर्भवती २०७६ साल भदाै १८ दिनदेखि बेप’त्ता छिन् । स्थानीय शङ्कर रत्नकी १८ वर्षीया पाँच महिनाकी ग’र्भवती मनिषा रत्न परियार भदौ १८ गते रातिदेखि म्याग्दी सदरमुकाम बेनी बजारमा रहेको घरबाटै बे’पत्ता भएकी हुन् । उनि घरबाटै बेपत्ता भएपछि कुनै परिवारकाे सम्पर्कमा नरहेको जानकारी छ ।
भदौ १२ गते हरितालिका तीजका लागि माइतीमा आएकी परियार स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि १८ गते घर फर्किएकी थिइन् । घर फर्किएको साँझ ७ः३० बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएको उनका श्रीमान् शङ्कर रत्नले जानकारी दिए । माइत आएकी छोरीलाई पेट दुख्ने, स्वास फेर्न गाह्रो हुने समस्या देखिएपछि मनिषाकी आमा सिर्जना र ठूलो बाबु विकास परियारले १८ गते साँझ ५ बजे घर पुर्याएर फर्किएका थिए ।
आफू फर्किएर पाङ आइपुगेपछि छोरीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न राति ७ः३० बजेको समयमा फोन गर्दा श्रीमान्ले उठाएको र त्यसपछि साँझदेखि नै छोरी सम्पर्कमा नआएको सिर्जनाले बताए । मनिषाले चार वर्षअघि भागेर शङ्करसँग प्रेम विवाह गरेको बताइएको छ । हाल उनि बेप’त्ता भएको पनि ६ महिन पुगिसकेको छ । यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी प्रमुख फेरिएर नयाँ डिएसपी किरणजंग कुँवर अाएपछि बे’पत्ता बनेकी मनिषाको खोजीकार्य तिब्र पारिएको बताएको छ।
करिस्मालाई परपुरुषसँग श्रीमानले आफूलाई रात बिताउन लगाएपछि…
एजेन्सी । सामान्य महिला मात्र होइन विशिष्ट श्रेणिमा पुगेका महिला पनि हिँ’सा’को सि’कार हुने गरेका हुन्छन् । सामान्य जिवन जिउनेहरुको हिँ’सा’का घटना सार्वजनिक हुन्छन् तर विशिष्ठ श्रेणीमा पुगेका महिलाहरु आफ्नो इज्जतका कारण आफु माथि भएको हिं’सा लुकाउँछन् । अति नै भएपछि मात्र त्यस्ता घटना बाहिर आउँछन् । आफ्नो पतिसंग सम्बन्ध बिच्छेद गरेर दुई सन्तानको दायित्व पनि आफैले उठाएकी बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री करिश्मा कपुरले आफु माथि भएको हिं सा’को बारेमा सार्वजनिक गरेकी छन् ।
२१ दिनकै फरकमा बुवाआमा वितेपछि काजक्रियामा बसेकि १५ बर्षिया बालिकाकाे यस्तो अपिल… सेयर गराैं